Polisy Serba Sy Zazalahy Siriana Velon-tsiky: Mampiseho Amin’i Eoropa Ny Nandraisana Am-pifaliana Ireo Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2015 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Nederlands, Català, bahasa Indonesia, English
Sary narahana bitsika mitanisa Siriana iray mpitsoa-ponenana ao Belgrady: “feno fiderana ireo polisy #Serba ireo #Siriana. ‘Tsy mitanila ry zareo. Izy ireo no voalohany tsy nitondra anay ho toy ny biby.'” Sary avy amin'i Manveen Rana. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny marainan'ny 9 Septambra no nivoahan'ny sary etsy ambony, ary hatreo dia lasa niparitaka be tao amin'ny Twitter sy Facebook. Polisy Serba roa mijoro eo amin'ny toerana fiasàny ao afovoan-tanànan'i Belgrady, ka ny iray mitrotro zazakely Siriana, mipetraka amin'izao fotoana ao amin'ny toby namboarina maika hitoeran'ireo mpitsoa-ponenana, ao akaikin'ny toby lehibe ho an'ny fiarandalamby ao an-tanàna.
Manveen Rana, zokiolona amin'ny mpanao gazety ao amin'ny BBC Radio 4 no nandefa ny sary tao amin'ny Twitter. Toa nandeha nankany Serbia izy niaraka taminà andianà mpitsoa-ponenana avy any Gresy. Feno fitantarana ny diany ao amin'ny fahana amin'ny Twitter-n'i Rana, miainga avy amin'ireo fitarainan'ny mpitsoa-ponenana noho ny daroka nataon'ny polisy tao Gresy ka hatramin'ireo fandehanana fiara fitaterana manao lava alina sy ireo sary misy ny toby naorina tanaty hamehana ao afovoan-tanànan'i Belgrady.
Tonga eto Belgrady mamirifiry tamin'ny vao mangiran-dratsy , asa toy ny mahazatra; tranolay sy vahoaka matory eny amin'izay rehetra azony atoriana eny
Afovoan'i Belgrady. Maro amin'ireo #mpitsoa-ponenana no tsy mahatakatra hiditra hotely. Akanjo matevina no an'ny sasany, raha ny hafa indray mangovitra anaty bodofotsy
Nanorenan-dry zareo toerana fitsaboana mihitsy teo amin'ilay kianja ao Belgrady misy ny tobin'ireo #mpitsoa-ponenana, mba hanampiana ireo maratra nandritry ny dia
Farany dia mba mahafinaritra ny zava-misy ao Belgrady
Raha toa ireo Siriana mpitsoa-ponenana mandalo an'i Serbia ho any Hongria sy firenena hafa ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana ka toa miaina zavatra tsaratsara kokoa amin'ny ankapobeny eny an-dàlana raha mitaha amin'ireo any amin'ny firenena hafa, dia mitatitra i Rana fa marefo ireny olona ireny manoloana ireo vondrona izay manarararotra ny famoizampo manjo azy ireo. Mitaraina ireo mponina sasany ao Belgrady mahita ireo mpivarotra mandehandeha mandafo bodofotsy sy akanjo tonta amin'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ilay toeram-piantsonan'ny fiarandalamby ao afovoan-tanàna — efa ho avo telo na efatra heny amin'izay vidiny hitanao any amin'ny magazay mpaninjara, tsy misy latsaka. Rana izy tenany aza nandoa 70 Euro ho anà lehilahy iray izay tsy mpitondra fiarakaretsaka ara-dalàna akory (fantatra ao Belgrady amin'ny hoe “taxi sauvage”) ho sandan'ny dia iray izay tokony ho 10 Euro no naloany tamin'ireo fiarakaretsaka ara-dalàna ao Belgrady. Nomarihan'i Rana tao amin'ny Twitter fa toa kendren'ireo mpamily fiarakaretsaka amin'ireny saran-dàlana lafo ireny mihitsy ireo mpitsoa-ponenana, rehefa mitatitra azy ireny ho any amin'ny toeram-ponenany ao an-tanàna.
Tsy misy antra mihitsy ireo #Serba mpamily fiarakaretsaka. Tetezin-dry zareo ny faritra misy ny tobin'ireo mpitsoa-ponenana ary volabe no takiany any ampiafaràn'ny dia.
Taorian'ireo tatitra marobe vao haingana momba ny herisetran'ny polisy sy ny fitondra tsy an-drariny atao an'ireo mpitsoa-ponenana any amin'ny firenena Eoropeana sasany, nankalazain'ireo Serba mpampiasa aterineto sy ireo any an-toerana hafa ilay sarinà polisy mitrotro zazalahy Siriana mitsiky. Tao anatin'ny ora vitsy monja dia nahazo famerenana mandefa in-800 ilay bitska ary efa ho 1.000 no nankafy azy, ary tsy ela dia nameno ny Facebook sy ireo tambajotra sosialy hafa, satria mitohy averina alefa in-50 isaky ny ora iray ilay izy.
Ho an'ireo rehetra nitehaka ho an'ilay polisy #Serba nilalao niaraka tamin'ilay zazakely Siriana, ireto mbola misy sary vitsivitsy fanampiny
Na manakaiky ny 28 isanjato aza ny tahan'ny tsy fanànana asa ao aminy ary misy ny mimonomonona maneho tahotra ny amin'izay ho vokany amin'ny toekarena raha sanatria ka betsaka amin'ireo mpitsoa-ponenana no misafidy hijanona, amin'ny ankapobeny dia manaiky ary mazàna no manampy i Serbia sy ny vahoakany. Na ny vahoaka na ny olom-panjakana sy ny polisy dia toa samy nirona tamin'ny politikan'ny fandraisana an-tanàn-droa daholo tamin'ity olan'ny mpitsoa-ponenana misy ity. Ireo Serba mpampiasa media sosialy dia nidera ilay manamboninahitry ny polisy avokoa, ary maro ny olona no niteny fa ny fitserana tahàka izany no antenain-dry zareo ho hita avy amin'ireo mpampihatra lalàna manerana ny fireneny sy any amin'ny firenena hafa.
23 ora izayBelarosia